अमेरिकी सहयोगका परियोजनामा सरकारको रहस्यमय ढिलाई, ५५ अर्ब फिर्ता जाने जोखिम ! « GDP Nepal
( Thursday, December 12, 2019)
अमेरिकी सहयोगका परियोजनामा सरकारको रहस्यमय ढिलाई, ५५ अर्ब फिर्ता जाने जोखिम !
Published On : 11 August, 2019 11:18 am
काठमाडौं । नेपाल सरकारले रहस्यमय ढिलाइ गर्दा ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि आएको अमेरिकी सहयोग फिर्ता जाने जोखिम देखिएको छ । नेपाल सरकारले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरई)को तुलनामा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीए)लाई महत्व नदिएको अमेरिकी बुझाइ छ ।
एमसीसीमार्फत नेपालमा एकमुष्ट रुपमा आएको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग अर्थात ५० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) फिर्ता जाने परिस्थिति देखिएको छ । एमसीसीको स्थापनाकालिन संयोक कृष्ण ज्ञवालीका अनुसार विश्वका ४० देशले एमसीसीको शर्त पूरा गरेर सहयोग लिइसकेका छन् ।
पूर्वसचिवसमेत रहेका ज्ञवाली भन्छन्- सबैको सहयोग रह्यो भने पाँचवर्षे समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । विश्वका ४०ं देशले गरेका छन्।मंगोलिया,फिलिपिन्स, इण्डोनेशियाले सक्दा नेपालले किन नसक्ने ?
परियोजना अघि बढाउनका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजनालार्इ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र विद्युत नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने सर्त पूरा भएको छ ।
तर, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सवै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने पूर्व सर्तहरू पूरा भएका छैनन् ।
यी सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू हुन् । कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएपनि बल्ल संसद पुगेको छ भने अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको मोडालिटी पूरा भइसकेको छैन ।
मिलेनियमन च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार एमसीसीअन्तर्गत ऊर्जा र सडक परियोजनाको निर्माण कार्य २०७७ असार १६ गतेदेखिमात्र हुने भएका छन् । पूर्वनिर्धारित तालिकाभन्दा १० महिना पछि धकेलिएको यो परियोजना समयमै सम्पन्न नभए अमेरिकाले अनुदान फिर्ता लैजानेछ ।
नेपाल सरकारले यी परियोजनाका लागि १३ करोड अमेरिकी डलरबारबर लगानी गर्नेछ ।
काठमाडौं । इलामको एक गाउँपालिकाले अविवाहितलाई पनि भत्ता दिन थालेको समाचारसँगै मुलुकमा संघीयताको कतै गलत
दराजको भोलिदेखि अर्को किनमेल मेला १२.१२ सुरु हुँदै, ६० प्रतिशतसम्म छुटको घोषणा !
काठमाडौं । दराजले वर्षको अन्तिम भव्य किनमेल मेला दराज १२.१२. को घोषणा गरेको छ ।
जापान जान ४९७ नेपालीले भाषा परीक्षामा दिएकोमा ४४१ जना फेल !
काठमाडौं । नेपाली युवाको रोजगारीका लागि वैध माध्यमबाट जापान जाने सपना पूरा नहुने सम्भावना देखिएको
अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारी भन्छन्- नेता र कर्मचारीमा देश विकास गर्ने इच्छाशक्ति नै देखिएन !
काठमाडौं । युवा अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीले मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा कुनै